शैक्षिक सत्र २०७४ को परीक्षा सकिएर नतीजा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । विद्यालयगत रुपमा भएको परीक्षाको नतीजा आफ्नो ठाउ“मा होला, तर कक्षा ८ को परीक्षाको परिणामले एउटा तरङ्ग र प्रश्न उब्जाएको छ की शिक्षाका अभियन्ता रुपचन्द्र विष्टलाई सम्मान गर्दै नामाङ्कन भएको थाहा नगरपालिकाको शैक्षिक स्तर किन यति गिर्दो अवस्थामा छ ? समग्र विद्यालयहरुमाथि यो प्रश्न तेर्सिएको छ र अब शुरु भएको छ विद्यार्थीको होइन, विद्यालयको परीक्षा ।
थाहा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएलगत्तै शिक्षामा केही परिवर्तन गर्न खोजेको देखिन्छ । मेयर लवशेर विष्ट नेतृत्वको नगर शिक्षा समिति, कार्यपालिका सदस्य शशिधर सुवेदी नेतृत्वको शिक्षा ऐन मस्यौदा समिति र कार्यपालिका सदस्य किरणमान बल नेतृत्वको सामाजिक विकास समिति एवम् नगरस्तरीय परीक्षा समितिले शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन खोजेकै हो । पठनपाठनमा भन्दा परीक्षामा नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप आए पनि मेयर विष्ट भन्छन्, ‘हामीले ठूलो आँट गरेर कक्षा ८ को परीक्षा नगरस्तरमै सञ्चालन ग¥यौं, यसबाट हाम्रो शिक्षाको स्तर कहाँ छ भन्ने क्लियर भएको छ ।’
परीक्षा समितिका अनुसार शान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशन भएअनुसारको कक्षा ८ को नतीजाले अधिकाँश वा सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण देखाइएका विद्यालयहरु खुशी हुनु पर्दैन, किनकि ३० अंकसम्म ल्याएका विद्यार्थीहरुलाई अर्को ४० अंक ‘ग्रेस’ दिएपछि उक्त नतीजा आएको हो । ‘यदि ४० अंक ग्रेस नदिने हो भने विद्यालयहरु नीलका नील हुने देखिए, त्यसैले परीक्षार्थीले प्राप्त गरेको ३० अंकलाई आधार मानेर थप ४० अंक छरुवा दिइएको हो, वास्तविक नतीजा हेर्ने हो भने हामी शर्मनाक अवस्थामा छौं,’ शिक्षा समितिका एक सदस्यले शान्तिपुर दैनिकसँग भने । थाहा नगरको कक्षा ८ को नतीजाको यथार्थतासम्बन्धी समाचार शान्तिपुर दैनिकको अनलाइन सहकर्मी विकासखबर डटकमले प्रकाशन गरिसकेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीहरुको होइन, विद्यालयकै परीक्षा हुने शिक्षा समितिका सदस्य एवम् नगरकार्यपालिका सदस्य शशिधर सुेदीले बताए । उनले भने, ‘कक्षा ८ को परीक्षामा आगामी वर्ष ग्रेस दिइने छैन र सी ग्रेडलाई उत्तीर्णको आधार बनाइनेछ । यसैले विद्यालयहरुले अहिलेदेखि नै योजना बनाएर पठनपाठन शुरु गर्नु राम्रो हुन्छ ।’
यस वर्षको कक्षा ८ कै नतीजालाई आधार बनाएर नगर शिक्षा समितिले घुमाउरो तरिकाले दण्ड र पुरस्कारको थालनी गरिसकेको छ । पुरस्कार नै नभने पनि बागेश्वरी मावि र सुनौला माविलाई प्रावि तहमा दरबन्दी थपिनु कक्षा ८ कै नतीजाको सफलता हो । यी दुबै विद्यालय नतीजामा अब्बल देखिएका थिए । त्यस्तै परीक्षामा निकै कमजोर देखिएका विद्यालयहरुले राज्यको तर्फबाट पाउँदै आएको वा पाउने सुविधामा कमी हुनसक्ने संकेत गरिएको छ । खासमा कक्षा ८ को मात्र नभएर थाहा नगरको समग्र शैक्षिक अवस्थाबारे जनप्रतिनिधिहरु आफै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । विकासको मूल मानिने शिक्षा क्षेत्रमै व्यापक कमजोरी देखेपछि जनप्रतिनिधिहरु यस्तो अवस्थालाई टुलुटुलु हेरेर बस्दा आलोचित हुने भयले पनि आफै अगाडि बढेका हुन् । पछिल्लो पटक शिक्षा समितिका संयोजक विष्ट, सदस्य शशिधर सुवेदी, किरणमान बल,
कार्यकारी अधिकृत हरिलाल पुरी लगायतको टोलीले थाहानगरको १४ विद्यालयमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा पत्रकारलाई लगिएको थिएन, किनकि अनुगमनमा राम्रो देखिँदैन र समाचार बाहिर आउँछ भन्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई पहिले नै थाहा थियो । विद्यालयहरुमा देखियो पनि त्यस्तै । प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त अनुगमनको क्रममा मेयरसहितको टोली अनुगमनमा आउँदैछ भन्ने थाहा पाएर केही विद्यालयहरुले अर्कै विद्यालयमा जाने विद्यार्थीहरुलाई समेत बोलाएर कक्षामा राखेका थिए । अनुगमन टोलीका सदस्यहरुले कक्षामा विद्यार्थीलाई तिम्रो नाम र विद्यालयको नाम भन भन्दा अर्कै विद्यालयको नाम भनेका थिए । श्रोतका अनुसार किन यो विद्यालयमा आएको भनेर टोली सदस्यले सोध्दा ती विद्यार्थीले आज यहाँ काम छ, कार्यक्रम छ भनेर यतै राखे, हामी त त्यतिकै आएका हौं भनी स्पष्ट जवाफ दिएका थिए । यसरी अर्कै विद्यालयमा पढ्दै गरेका र आजमात्र आएका विद्यार्थीहरु कोको छौ, हात उठाउ भन्दा आधाजसो विद्यार्थीले हात उठाएका थिए । अनुगमनमा देखिएका यस्ता धेरै यथार्थहरु भएको श्रोतले बताएको छ ।
अनुगमनको अघि र पछि शिक्षा समितिका सदस्यहरुले शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुलाई अलगअलग भेटेर कुराकानी गर्दा एक अर्कालाई दोष दिने गरेको पाइएको छ । समिति सदस्य शशिधर सुवेदीले भने, ‘अध्यक्षहरु भन्छन् हामीलाई पावर छैन, हेडमास्टरको मनोमानी चलिरहेको छ । प्रधानाध्यापकहरु भन्छन्, विव्यस नाममात्रको छ, हामीलाई फूल पावर छैन, शिक्षकहरु टेर्दैनन् । शिक्षकहरु प्रश्न गर्छन््, हेडमास्टरलाई वर्षमा कति दिन विदा हुन्छ ? उनीहरु नियमित स्कूल आउनुपर्दैन ? उनीहरुलाई गतिलो बनाउनुस् ।’
अरुलाई दोष दिएरमात्र हुँदैन । त्यसैले शिक्षा समितिले कक्षा ८ को नतीजालाई आधार मानेर विषयगत रुपमा शिक्षकहरुसँग छलफल चलाउने भएको छ । ‘विषयगत रुपमा शिक्षकहरुसँग छलफल गर्छाैं, त्यसपछि प्रअ र विव्यस अध्यक्षहरुसँग बसेर कमिटमेन्ट गर्न लगाउँछौं, केही चाहिँ गरेरै देखाउँछौं,’ सुवेदीले भने ।